स्वीडेनकै अदालत गएर पनि असुल्छौँ एनसेलसँग ७२ अर्बः सरकार (भिडिओसहित) « Janata Samachar
स्वीडेनकै अदालत गएर पनि असुल्छौँ एनसेलसँग ७२ अर्बः सरकार (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति :5January, 2018 7:27 am
अर्बाैँ रकम विदेश लगिरहेको एनसेलले किन तिरेन राज्यलाई ६५ अर्ब कर ? जरिवाना जोड्दा पुग्छ ७२ अर्ब ?
काठमाडौँ । ठूला करदाता कार्यालयले नेपाल र स्वीडेनकै अदालत गएर भए पनि एनसेलसँग लिनु पर्ने कर असुल्ने तयारी गरेको छ । जरिवानासहित ७२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न आउन १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको कार्यालयले समयमा कर तिर्न नआए अदालत गएर भए पनि कर असुल्ने तयारी गरेको हो ।
एक करोड ४० लाखको हातमा एनसेल मोबाइल छ । कम्पनी स्थापनाको १४ वर्ष अझ भनौँ पछिल्लो ७ वर्षमा उसको कमाइ छ लगानीको दुई हजार गुणा । त्यही कम्पनी नेपालको ठूला करदाता पनि अर्थात् १३ प्रतिशत कर त उ एक्लैले तिर्छ । अर्बाैँ रकम विदेश लगिरहेको एनसेलले किन तिरेन राज्यलाई ६५ अर्ब कर ? जरिवाना जोड्दा पुग्छ ७२ अर्ब ?
ठूला करदाता कार्यालयले १५ दिनभित्र एनसेललाई कर तिर्न सूचना जारी गरेको छ । राज्यको यो अभियानमा राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै कर छलेर रकम विदेश लैजान लागिरहेको एनसेललाई कर तिर्ने अवस्था बनाउनु नागरिकको पनि दायित्व हो । के हो एनसेल प्रकरण, कति कर तिर्न बाँकी छ र राज्य कसरी कर असुल्ने तयारीमा छ ?
जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बाइलाइन’को जनवरी ४ मा प्रसारित पूरा भाग हेर्नुहोस्ः